I-Chrome 92 iza nokuphuculwa kwezokhuseleko, ukusebenza kunye nokunye | Ubunlog
I-Chrome 92 iza nokuphuculwa kwezokhuseleko, ukusebenza kunye nokunye
Ubumnyama | 22/07/2021 00:02 | software
Ukukhutshwa kwenguqulelo entsha ye Google Chrome 92 apho ku uphuculo olwenziweyo lwenziwe kwaye phakathi kwabo sinokufumanisa ukuba izixhobo zongezwa kuqwalaselo ku lawula ukubandakanywa kwezinto eziyimfihlo zeSandbox. Ngale nto, umsebenzisi unethuba lokungasebenzi kwitekhnoloji yeFLC.
Olunye utshintsho olubonisiweyo lukwinguqulelo yedesktop apho i-caching yangemva yenziwe ngokungagqibekanga, ukubonelela ngotshintsho olukhawulezileyo xa usebenzisa amaqhosha "Buyela" kunye no "Phambili" okanye xa ukhangela amaphepha abonwe ngaphambili wesiza sangoku. Ngaphambili, i-cache eqingqiweyo yayifumaneka kuphela ekwakhiweni kweqonga le-Android.
Kuyacaciswa ukuba Ukubekwa bucala kweendawo kunye neeplagi kwiinkqubo ezahlukeneyo kuye kwaphuculwa njengoko ngaphambili indlela yokuzahlula isiza ibiqinisekisa ukubekwa bucala kweesayithi enye kwenye kwiinkqubo ezahlukeneyo, kwaye ukwahlula zonke iiplagi kwinkqubo eyahlukileyo, emva koko kwinguqulelo entshaUkwahlulahlulwa kwezongezelelo zesikhangeli kuyenziwa ngokususa nganye kwinkqubo eyahlukileyo, eyenza ukuba kube nakho ukwenza omnye umqobo wokuzikhusela kwizongezo ezinobungozi.
Kwakhona, ukusebenza kunye nokusebenza kakuhle kwesikhangeli kuphuculwe ngokubonakalayo ekufumaneni ubuqhetseba. Isantya sokubhaqa ubuqhetseba esekwe kuhlalutyo lomfanekiso wasekhaya kwisiqingatha samatyala anyuke aya kumaxesha angama-50 nakwi-99% yamatyala kwafunyaniswa ukuba ubuncinci ubuncinci amaxesha angama-2,5.
Ukuphuculwa kwezokhuseleko singayifumana loo nto Imfuno yaziswa ukufaka isicelo sokuqinisekiswa kwezinto ezimbini ukusuka kumakhi xa uthumela izinto ezongezwayo okanye uhlaziyo kuVenkile yeWebhu yeChannel.
Ngexesha yotshintsho esinokulufumana kuhlobo lwe-Android Iphaneli ineqhosha elitsha elinokwenziwa ngokwezifiso «Isixhobo soMlingo» esibonisa iindlela ezimfutshane ezahlukeneyo, ikhethwe ngokusekwe kwimisebenzi yangoku yomsebenzisi kwaye ibandakanya amakhonkco onokuwadinga ngeli xesha.
Ukuphunyezwa kwemodeli yokufunda komatshini kuhlaziyiwe eqhuba kwisixhobo ukukhangela iinzame zobuqhetseba. Xa kufunyenwe inzame zobuqhetseba, ukongeza ukubonisa iphepha lesilumkiso, isikhangeli ngoku siza kuthumela ulwazi malunga nohlobo lwemodeli yokufunda ngomatshini, ubunzima obubalwayo kwicandelo ngalinye kunye nophawu lokufaka imodeli entsha kwinkonzo yangaphandle yokuKhangela ngokuKhuselekileyo.
Kususwe ukhetho "Bonisa iingcebiso kumaphepha afanayo xa iphepha lingafumaneki", ekhokelele kwisindululo samaphepha afanayo ngokusekwe kwisicelo kuGoogle ukuba iphepha alifumaneki. Olu seto lwalususwe ngaphambili kwinguqulelo yedesktop.
Kwaye kwakhona Ukusetyenziswa kwendlela yokuzahlula isiza kwiinkqubo ezizodwa kwandisiwe. Ukuza kuthi ga ngoku, ziisayithi ezinkulu ezikhethiweyo kuphela ezibandakanyiweyo kwiinkqubo ezahlukeneyo zezizathu zokusebenzisa izixhobo. Kwinguqulelo entsha, ukubekwa bucala kuya kuqala kusebenza kwiindawo ezingene ngemvume nge-OAuth (umzekelo, ukudibanisa ngeakhawunti kaGoogle) okanye ukuseta i-HTTP Cross-Origin-Opener-Policy header.
Uhlaziya njani okanye ufake iGoogle Chrome ku-Ubuntu kunye neziphumo?
Kulabo banomdla wokukwazi ukuvuselela kuhlobo olutsha lwesikhangeli kwiinkqubo zabo, banokwenza oko ngokulandela imiyalelo esabelana ngayo ngezantsi.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile jonga ukuba uhlaziyo sele lukhona, ngenxa yoku kufuneka uye chrome: // izicwangciso / uncedo Kwaye uyakubona isaziso sokuba kukho uhlaziyo.
Kwimeko ayinjalo Kuya kufuneka uvale isikhangeli sakho kwaye uvule i-terminal kwaye uthayiphe:
Uvula isikhangeli sakho kwakhona kwaye kufuneka ukuba sele ihlaziyiwe okanye isaziso sokuhlaziya siza kuvela.
Kwimeko apho ufuna ukufaka isikhangeli okanye ukhethe ukukhuphela iphakheji yetyala lokuhlaziya, kufuneka yiya kwiphepha lewebhu lesikhangeli ukufumana iphakheji yedebhu kwaye sikwazi ukuyifaka kwinkqubo yethu ngoncedo lomphathi wephakheji okanye kwisiphelo sendlela. Ikhonkco yile.
Nje ukuba iphakheji ifunyenwe, kufuneka sifake kuphela ngalo myalelo ulandelayo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » I-Chrome 92 iza nokuphuculwa kwezokhuseleko, ukusebenza kunye nokunye
Nciphise ukucofa, iindlela ezimbalwa ezilula zokuyenza ukuba ibe Ubuntu
I-Blue Recorder, ukhetho olunobunzima bokurekhoda Ubuntu kwidesktop